Nepal Recovery – Nepal Recovery
Location Trade Tower, Thapathali
Sunday - Friday: 10.00 - 5:00
नेपाल रिकभरी वेब पेज एकीकृत डिजिटल प्लाटफर्म हो । यसमा हामी कोरोना भाइरस COVID-19 PANDEMIC ले उद्योग व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको चक्रिय संकटलाई केलाएर यसका समाधानका लागि भइरहेका प्रयासहरु प्रस्तुत गर्छौं । यसले आर्थिक क्षति कम गर्न र पुनर्उत्थानका लागि भएका प्रयासहरुको भरपर्दो जानकारी प्रदान गर्दछ ।
कोरोना भाइरस COVID-19 PANDEMIC ले अर्थ व्यवस्थामा पारेको चक्रिय संकट सामना गर्न, नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत सुझाव तथा पहल र व्यवसाय सुचारु गर्न लागि आवश्यक सेवा तथा सूचनाहरू प्रदान गरिरहेको छ । यसका लागि परिसंघले आफ्ना सदस्य प्रतिष्ठानहरु तथा समग्र उद्योगी, व्यवसायी र नेपाल सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेको छ ।
Trade Tower, 5th Floor Thapathali
Cni Relief Efforts
New Normal Efforts
नीतिगत सुझाव तथा पैरवी
Read More कोरोना भाइरस महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको चक्रिय संकट समाधान गर्न सि.एन. आइले सरकारलाई
नीतिगत सुझाव दिने तथा व्यवसाय टिकाउन आवश्यक बहस पैरवी गरिरहेको छ । CNI POLICY INTERVENTIONS FOR SURVIVAL & RECOVERY GOVERNMENT'S RELIEF PACKAGE Read More नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारका विभिन्न निकायले
अल्पकालीन राहत प्याकेजहरू घोषणा गरेका छन् । यस्ता प्याकेजहरु
अपर्याप्त भएकाले थप राहतका लागि प्रयास जारी छ । सरकारको राहत प्याकेजहरु राहत पहल
Read More परिसंघले कोभिड-१९ सँग जुध्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा र संक्रमितहरुको परीक्षण तिर
अत्यावश्यक सामग्रीहरू सरकारलाई उपलब्ध गरायो । सँगसँगै लकडाउनले जोखिममा परेका
समुदायलाई तुरुन्त राहत प्रदान गर्यो । CNI RELIEF EFFORTS
उद्योग तथा व्यापार सुचारु गर्ने पहल Read More परिसंघले लकडाउन अवधिमा समेत उद्योग व्यवसायहरूको सम्भव भएसम्म
उत्पादन तथा सेवाहरू विस्तारै सुचारु गर्न सरकारका निकायसँगको
समन्वयमा उद्योग व्यवसायका लागि सवारी पास उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ । NEW NORMAL EFFORTS इकोनोमिक सरभाइभल वेबिनार सिरिज Read More इकोनोमिक सरभाइभल वेबिनार सिरिजमा (CNI-Economic Survival, Webinar
Series) पहिलो दिन Rescue: Banking and Finance, Session
दोस्रो दिन Reinforce:Energy and Agriculture, Session तेस्रो दिन Restart:
Industry and Labor, Session र चौथो दिन Respond: Economy मा गहन
छलफल भयो । नीतिगत बहसका लागि यो वेबिनार महत्वपूर्ण रह्यो । WEBINARS
कोरोना भाइरस COVID 19-PANDEMIC ले अर्थ व्यवस्थामा पारेको चक्रिय संकट सामना गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत सुझाव तथा पहल, व्यवसायका लागि आवश्यक सेवाहरू तथा सूचनाहरू प्रदान गर्न निरन्तर कार्य गर्यो । के के गर्यो परिसंघले हेरौँ ।
कोभिड १९ ले उद्योग, व्यवसाय तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यून गरी आर्थिक पुनर्उत्थानमा जुट्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो । यसका लागि विश्वसनीय जानकारी र सघन छलफल आवश्यक छ । यसबाट उचित निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
परिसंघले आफैँ र विभिन्न साझेदारहरुसँग इम्प्याक्ट सर्वेक्षणमा काम गरिरहेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन ILO सँगको सहकार्यमा भइरहेको यो सर्वेमा राखिएका जिज्ञासाहरु हेरौँ । यसले तपाइँको केही मिनेट मात्र लिने छ तर यसबाट तयार हुने विश्लेषणले विपद् बाट उठ्न मद्धत गर्न सक्छ ।
यो लिंकमा जानुहोस्
नेपाल उद्योग परिसंघले कोभिड-१९ र लकडाउनले अर्थतन्त्रमा भएको र हुन सक्ने क्षति कम गरी अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा वेबिनार सिरिज आयोजना गरिरहेको छ । यसले कोभिड तथा लकडाउन प्रभावित व्यवसायको पुनर्उत्थान तथा रोजगारी सिर्जनाका उपायहरुलाई पनि समेट्ने छ ।
सुरुमा फ्रस्ट एण्ड सुलिभानसँगको साझेदारीमा चार दिन सम्म इकोनोमिक सरभाइभल वेबिनार सिरिज (CNI-Economic Survival, Webinar Series) आयोजना गर्यो । यो नीतिगत बहसका लागि निकै महत्वपूर्ण रह्यो ।
Webinar Move on
COVID -19 ECONOMIC SURVIVAL
सञ्चार माध्यममा हाम्रा पहलहरु
कोरोना भाइरस महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको चक्रिय संकट समाधान गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले गरेका पहल तथा आवश्यक बहस पैरवीलाई सञ्चार माध्यमहरुले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेका छन् ।
कोभिड–१९ प्रभाव : मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अवलम्बन गर्न सङ्घको सुझाव
By root/ Nagarik Khabar
काठमाडाैं । नेपाल उद्योग परिसङ्घले कोरोना भाइरसका कारण देखापरेको प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न विस्तारित मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अघि सार्न सरकारलाई...
मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अवलम्बन गर्न सङ्घको सुझाव थप सामग्री
By root/ Shilapatra
नेपाल उद्योग परिसङ्घले कोरोना भाइरसका कारण देखापरेको प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न विस्तारित मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अघि सार्न सरकारलाई सुझाव...
विस्तारकारी वित्तीय नीति अवलम्बन गर्न परिसंघको माग
By root/ Baahra Khari
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्र एवं उद्योग व्यवसायमा पारेको असरबाट बचाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । परिसंघले उद्योग, वाणिज्य...
Sun – Tue: 10.00 – 18.00
Fri : 10.00 – 14.00
© Copyright Nepal Recovery 2020. All Rights Reserved